Ihe ncheta: Nyocha na ntanetị na nyocha nke otu | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 3, 2014 Wednesday, April 2, 2014 Douglas Karr
Usoro ncheta bụ ngwa dị mfe iji nke na-eweta ụdị nyocha nke otu na-elekwasị anya na ntanetị ma na-enye gị ohere ijikọ ndị na-ege gị ntị iji ghọta ihe kpatara ya na otu ndị na-ege gị ntị si eche echiche ma na-eme omume dịka ha na-eme ma kpughee ọhụụ ọhụrụ na arụmọrụ maka azụmahịa gị. Ndị na-ege ntị gụnyere ndị ahịa gị, ndị ọrụ gị, ndị otu, ndị itinye ego, ụmụ akwụkwọ yana netwọkụ mmekọrịta.
Usoro ihe ncheta na-eweta usoro nke inyocha akparamagwa na mmeghachi omume mmetụta uche site na mmadụ iche iche na-elekwasị anya na ntanetị ma nye gị otu ngwaọrụ ahụ Pros na-eji. Ndị ọrụ nke ọrụ ahụ na-achọ nzaghachi na echiche pụrụ iche, nweta nghọta ka mma banyere ndị ahịa ha ma nwalee mgbasa ozi na echiche ahịa. N'elu ikpo okwu n'efu, nke na-ebuli elu maka mkpanaka, ìgwè dị iche iche nke ndị mmadụ nwere ike itinye aka ma jụọ ajụjụ a na-emeghe nke ha nwere ike ịzaghachi na ederede, onyonyo, vidiyo, faịlụ, na mmemme mgbasa ozi ndị ọzọ bara ọgaranya - gụnyere akara ngosi mmekọrịta yana map ọkụ. nke nsonaazụ - na usoro dị mfe ma hazie.
Depụta atụmatụ, akara ngosi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ụdị faịlụ ọ bụla ma mee ka ndị mmadụ jiri akara ngosi mmekọrịta gosipụta ihe masịrị ha na ihe ndị na-adịghị ha mma na onyonyo a. A ga-ewepụta onye okike site na nsonaazụ ya na maapụ ọkụ.
Nduzi - A na - eduzi ndị na - eso ya site na omume ndị na - eme ka ha tinye aka ma nwee mmasị.
Social - Ndị sonyere nwere ike iso ibe ha na-emekọrịta ihe n’ onlinentanet ma onye nhazi ahụ nwere ike iduzi mkparịta ụka ma lelee nsonaazụ ya.
mobile - Akwadoro nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka niile, gụnyere smartphones, mbadamba na laptọọpụ.
Analytics - Ngwá ọrụ ohuru dị mfe usoro nyocha. Akụkọ zuru ezu na nhọrọ nchịkọta nhọrọ bara ụba na-akwado nkọwa data.
International - A na-enye interface interface ugbu a na Bekee, French, Spanish, Portuguese (Brazil), German, Italian na Dutch.
Sochie azịza gị na Usoro ncheta na ezigbo oge site na iji ngwa nyocha ọhụụ. Chọgharịa data na-abata dị ka nyocha ọhụụ, na-agba ọsọ akụkọ, ma ọ bụ na-emepụta transcripts.
Tags: ndị na-elekwasị anyanyocha ekwentịnyocha ịntanetịncheta usororesearchnetwọk mmekọrịtanyochanyocha onye ọrụ